ES420-26P L2 Gigabit Beddelka Maareynta Maareynta Fudud
DCN ES420-26P waa Gigabit Maamulida Ethernet, oo bixisa 24 10/100 / 1000Mbps RJ45 iyo 2 SFP port. Dakad kasta waxay taageertaa shaqada tooska ah ee MDI / MDIX, waxayna ku guuleysan kartaa gudbinta xawaaraha siligga. Beddelka ES420-26P waa ku-xirnaanta maareynta shabakadda oo dhammaystiran-gigabit Layer 2 oo loogu talagalay loona horumariyey si madax-bannaan dhisidda shabakado gigabit oo waxqabad sare leh. Waxay bixisaa nidaam ilaalin nabadgelyo oo dhammaystiran, siyaasadaha QoS oo dhammaystiran, iyo hawlo VLAN hodan ah. Way fududahay in la maareeyo oo la ilaaliyo, waana ...
ES420-10P L2 Wareejinta Maareynta Fudud
DCN ES420-10P waxay bixisaa 8 * 10/100 / 1000M otomaatig ah MDI / MDIX oo lagu daray 2 * dekedda SFP oo xaqiijin karta gudbinta xawaaraha siligga. Waxay taageeri kartaa ACL oo ku saleysan dekedda, si fudud loogu gaaro kormeerka shabakadda, xakameynta taraafikada, tixgelinta mudnaanta iyo horay u socodka taraafikada; taageer STT / RSTP / MSTP L2 tiknoolajiyada ilaalinta isku xidhka, si weyn u wanaajiya awoodda isku xidhka isku xidhka, xaqiijinta xasiloonida shabakadda; Taageer ACL oo ku saleysan kala duwanaanta waqtiga si loo gaaro xakamaynta helitaanka saxda ah si fudud; taageero sugida 802.1x oo ku saleysan MAC iyo p ...
DIN-Rail L2 Wareejinta Warshadaha
IS2100D (R2) Taxanaha Wareega Warshadaha wuxuu keenayaa isku xirnaanta xawaaraha sare ee Gigabit Ethernet qaab isukeen ah waxaana loogu talagalay barnaamijyo badan oo warshado ah halkaasoo alaab adag loo baahan yahay. Barxadda waxaa loo dhisay inay iska caabbiso jawiga adag ee wax soo saarka, tamarta, gaadiidka, macdanta, iyo magaalooyinka caqliga badan. Barxadda IS2100D (R2) sidoo kale waxay ku habboon tahay fidinta shirkadaha ballaarinta meelaha bannaanka ah, bakhaarada, iyo xarumaha qaybinta. Wareegyadan waxay ku shaqeeyaan barnaamijyo ku saleysan ...
IS5600G-2U / IS5600XG-2U Wareejinta Warshadaha
IS5600G-2U / IS5600XG-2U lakabka 3 qaabka gigabit-ka elektaroonigga ah wuxuu taageeraa hab maamuuska Lakabka 2/3. Waxay bixisaa farsamo giraan ah oo aan loo baahnayn oo gudaha u noqon kara xulasho ku habboon lakabka isku-darka gudaha otomaatiga warshadaha iyo codsiyada xakamaynta nidaamka. IS5600G-2U / IS5600XG-2U waxay bixisaa seddex 8- dekedda 1000Mbps Ethernet boosaska qaybsan iyo hal 4 dekedood 1000Mbps / 10Gbps qaybta qaybta qaybta hore. Combuyuutarka isku xidhka Giga dekeddu wuxuu bixiyaa SFP interface oo ah kor u qaadista GE / 10G ama ...
IS5600 Taxanaha L3 Industrial Swich
IS5600 taxanaha iskudhafka gigabit ethernet-ka wuxuu taageeraa hab maamuuska Lakabka 2/3. Waxay bixisaa farsamo giraan ah oo aan loo baahnayn oo gudaha u noqon kara xulasho ku habboon lakabka isku-darka gudaha otomaatiga warshadaha iyo codsiyada xakamaynta nidaamka. Astaamaha iyo Faa'iidooyinka Waxyaabaha ugu Muhiimsan Xannibaadda xawaaraha buuxa ee Layer2 / 3 horay u sii dhaafsada Heerka Ethernet ee isku xidhka Wicitaanka awood la'aanta si ay u bixiso soo kabashada shabakadda. Ku darma softiweerka maareynta SNMP si loo helo shabakad dhameystiran ...
CS6200 (R2) Dual Stack 10G Ethernet Router Copper Switch
DCN CS6200-EI wareejinta taxanaha naxaasku waa jiilka soosocda 10G wareejinta wadida isku xidhka ee bixiya helitaanka gigabit go'an iyo 10GE dekado kor udhaafaya. Beddelka naxaasta CS6200-EI wuxuu leeyahay qalab casri ah iyo naqshadeynta naqshadaha softiweerka. Wareegyadan waxay bixiyaan helitaan sare, miisaan, amniga, waxtarka tamarta, iyo sahlanaanta hawlgalka oo leh astaamo hodan ah sida VSF (Virtual Switch Framework), IEEE 802.3at optional iyo koronto la'aan. Waxay ku habboon tahay isu geynta cufnaanta sare ama lakabka aasaasiga ah ...
CS6200 (R2) Dual Stack 10G Ethernet Wadista Fiber Furaha
DCN CS6200-EI fiilooyinka taxanaha ah waa jiilka soosocda ee 10GbE iskudhafyada isdabajoogga ah ee bixiya helitaanka gigabit indhaha oo go'an iyo 10GbE dekado kor udhaafaya. Beddelka fiber-ka CS6200-EI wuxuu leeyahay qalab casri ah iyo naqshad dhismeedka software-ka. Wareegyadan waxay bixiyaan helitaan sare, miisaan, amniga, waxtarka tamarta, iyo sahlanaanta hawlgalka oo leh astaamo hodan ah sida VSF (Virtual Switch Framework), sahay koronto oo xad dhaaf ah. Waxay ku habboon tahay isu-soo-ururinta indhaha ee cufnaanta sare ee xalalka FTTx ama ca ...
EAP380-E SMB Smart Gudaha 802.11ac wave2 Dual Band AP
DCN EAP380-E waa barta marin-u-helidda wireless-ka (AP) loogu talagalay suuqa SMB. Waxay bixisaa awoodaha taageerada adeegga oo dhameystiran waxayna leedahay kalsooni sarreysa, nabadgelyo sare, adeegsi shabakad fudud, helitaan toos ah AC iyo qaabeynta, iyo maareynta waqtiga dhabta ah iyo dayactirka, oo buuxiya shuruudaha hawlgelinta shabakadda ee fudud. AP wuxuu u hoggaansamayaa heerarka 802.11ac mawjadaha 2 wuxuuna bixin karaa ugu badnaan 1.167Gbps - 300Mbps ee 2.4G oo leh 2 × 2, 867Mbps oo 5G ah oo leh 2 × 2. The ...
EAP280-E SMB Smart Gudaha 802.11n Single Band AP
EAP280-E waa shirkad cusub oo kharash-ku-ool ah Wi-Fi AP (Access Point) oo ay soo bandhigtay DCN. AP-daani waxay taageertaa heerka 802.11n oo leh isku xirnaanta korantada ee Mega Ethernet. EAP280-E wuxuu ku shaqeeyaa 2.4G band oo soosaarka ugu badan wuxuu noqon karaa 300Mbps. EAP280-E waxay bixisaa shaqooyin badan oo raadiyaha, mobilada, amniga iyo injineernimada taraafikada ah iwm, waxay la shaqeyn karaan jirka ama daruurta AC (Access Controller) si loo helo shirkad, marin u helka shabakadda Wi-Fi iyo sidoo kale qolka fasalka dhijitaalka ah, Wi-Fi-ga ganacsiga ...
EAP220 waxaa lagu dhejin karaa x86 guddi caadi ah, iyadoon dib u dhis lagu sameynin darbiga si loo badbaadiyo kharashka iyo waqtiga, loona ilaaliyo qurxinta asalka ah. EAP220 waxay taageertaa bandhiga 802.11AC standard2.4G iyo 5G band, waxayna taageertaa bandwidth wireless-ka ugu sareeya ee la heli karo ee 733Mbps. EAP220 waxay bixisaa hal dekedda Ethernet ee 100M ah, hal dekedda 100M Ethernet iyo hal deked taleefan oo RJ11 ah. Dakadda kor u socota waxay taageeri kartaa 802.3af POE, sidaa darteed EAP220 kaliya ma bixin karto waxqabadka sare ee WIFI, laakiin sidoo kale waxay bixin kartaa ...
EAP180 waxaa lagu rakibi karaa guddi x86 caadi ah, iyada oo aan dib loo dhisin derbiga r si loo ilaaliyo waqtiga iyo kharashka. EAP180 waxay taageertaa heerka 802.11n oo ka shaqeeya 2.4G band, waxay bixin kartaa xawaare dhan 300M. EAP180 waxay bixisaa 1 * 100M uplink Ethernet ah, hal hoos 100M Ethernet deked ah iyo hal deked taleefan RJ11. Iyada oo ay la socoto kor u qaadista dekedda taageerta 802.3af POE, EAP180 ma bixiso oo keliya waxqabadka sare ee WiFi, laakiin sidoo kale isku xirka fiilooyin dheeri ah iyo xiriir taleefan. Astaamaha Muhiimka ah iyo Waxyaabaha muhiimka ah ee fudud t ...
EAC680 SMB Maamulaha Helitaanka Xannibaadda Smart
DCN EAC680 waa xakamaysade helitaanka caqli-gal ah (AC) oo loogu talagalay shabakadaha wireless-ka ee SMB iyo laamaha shirkadaha waaweyn. Waxay ku biiri kartaa DCN smart EAP dhibcaha helitaanka fiilooyinka wireless (APs) si loo sameeyo xal dhexdhexaad ah oo loo maamulo wireless LAN (WLAN). EAC680 waxay taageertaa 24 * 10/100 / 1000MBase-T iyo 4 * 10GbE SFP +) kor u kaca, waxay maamuli kartaa ilaa 520 smart wireless AP. Qalabku wuxuu bixiyaa xakamaynta marin u helka WLAN iyada oo loo marayo nidaamyo sida xakamaynta isticmaalaha saxda ah iyo maareynta, dhamaystirka maareynta RF iyo securi ...